सीमाना को संरक्षण र नागरिक सुरक्षा - राज्य को मुख्य कार्य को एक। सैन्य खर्च कुनै पनि देश को बजेट को एक निश्चित भाग लागि खाताहरू। आफ्नो मूल्य दुई मुख्य मापदण्डहरु देखि गठन गरिएको छ। तिनीहरूलाई को पहिलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण - यो देश महसुस कि बाह्य खतरा को डिग्री छ। दोस्रो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भावनाहरू दिइएको छ विशेष मा सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को आकार। "बन्दुक वा घिउ?" - एक पटक भन्दा बढी प्रश्न सधैं इमानदार जवाफ सुन्न चाहनुहुन्छ यद्यपि, आफ्नो मान्छे नेताहरू सोधे।
को militarization - सैन्य खर्च को शेयर मा अत्यधिक वृद्धि भएको छ। यो कारक, दुवै बाह्य र घरेलू को एक नम्बर कारण हुन सक्छ।
लियोन Trotsky, को RCP (ख) वी संग को नौऔं कांग्रेस मा आफ्नो polemic मा। एक युद्ध footing मा जवान सोभियत गणतन्त्र को अर्थव्यवस्था को संक्रमण मा Smirnov, को किसान र औद्योगिक श्रम एक शत्रुतापूर्ण वातावरण यस दृष्टिकोण justifying, सैनिक सेवा को कि जस्तै सिद्धान्तहरूमा संगठित पर्छ भनेर जिद्दी। यो केवल आधा-उपाय छ, र श्रम सेना मा सम्पूर्ण काम-उमेर जनसंख्या परिचालन को एक समर्थक थियो - यसबाहेक, क्रान्तिकारी सैन्य परिषद को अध्यक्ष militarized कि विश्वास गरे।
स्थिति वर्ष मा घेर गढ मा स्थिति समान थियो। यस मामला मा, कार्य रक्षा, र ग्रह मा सबै देशहरूमा एक समाजवादी सम्बन्ध भाग एक दृश्य संग धेरै क्षेत्रहरूमा मार्क्सवाद फैलाउने थियो।
को प्राथमिकता विकास भारी उद्योग, को 20s औद्योगीकरण को नीति corollary बनेको, जो मात्रा पहिले देखेका कहिल्यै मा हतियार उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ एक उत्पादन आधार, स्थापना उद्देश्य थियो। एकदम एक मौलिक नयाँ ऊर्जा क्षेत्रको निर्माण आवश्यकता, अर्थव्यवस्था को कुल ऊर्जा तीव्रता वृद्धि। यी सबै उपाय विपरीत मा, जनसंख्या हितमा सुधार गर्ने उद्देश्य थियो, मान्छे आफ्नो बेल्ट कस गर्न आवश्यक थियो।
यो दृष्टिकोण आवश्यक रक्षा उद्योग को प्राथमिकता। वास्तवमा, यो सोभियत संघ को militarization केही बिरुवाहरु रक्षा उत्पादनहरु उत्पादन भन्ने तथ्यलाई सीमित छैन। वस्तुतः देशको उत्पादन क्षमता सबै युद्ध लागि तयार प्रक्रिया संलग्न गरिएको छ। , उत्पादन लिइएको voenvedom प्रत्येक बोट वा बोट भाग मा धेरै दशकहरु बिना प्रोफाइल को, र विभागीय सम्बन्धन लागि।
रेडियो ईन्जिनियरिङ्, वस्त्र, भोजन, ट्रेक्टर र मिसिन-निर्माण उद्योग मुख्यतया रक्षा काम। उपभोक्ता सामान अवशिष्ट सिद्धान्त द्वारा उत्पादित। त्यसैले covertly militarization। यो घटना भारी बोझ मा वजन , सोभियत अर्थव्यवस्था सबै भन्दा राम्रो प्रतिभा र साँच्चै ठूलो स्रोतहरू चयन।
विशेष शब्दहरू ठाउँ को militarization योग्य हुनुहुन्छ। संसारको पहिलो उपग्रह लक्षित आणविक warheads गर्न छुटकारा गर्न सिर्जना गर्नुभएको सैन्य InterContinental मिसाइल कक्षा मा राख्नु भएको थियो। तसर्थ, सोभियत संघ कारण रक्षा उद्योग को उपलब्धिहरू नजिक-धरती स्पेस विकास मा प्राथमिकता।
सबैभन्दा सोभियत यात्री liners एक रचनात्मक रणनीतिक bombers वा सैन्य परिवहन विमान आधारमा बनाइयो।
यो लामो सैन्य खर्च बोझ पनि त सोभियत संघ रूपमा देश को प्राकृतिक र मानव संसाधन मा धनी लागि धेरै भारी साबित भयो। अत्यधिक militarization - यो समाजवादी अर्थव्यवस्था संकुचन किन कारण एक छ।
मोनाको अल्बर्ट द्वितीय को राजकुमार। जीवनी, जीवन को तथ्य, परिवार
एक "रन" के हो? यो बोझ वा सुअवसर?
उदारवादी लोकतन्त्र: परिभाषा, प्रकृति, विशेषताहरु, कमजोरी
झण्डा र Novorossisk को काखमा को कोट: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
Gambrel छत ट्रस सिस्टम: योजना, गणना, रेखाचित्र
सोधपुछ लागि स्टेशन पम्पिंग
Bagrov सर्गेई - के लेखे बारेमा कुरा चिन्ने लेखक
धर्म पूर्वी Slavs: एक संक्षिप्त विवरण
के माछा ओवन मा Bake गर्न सबै भन्दा राम्रो छ? पाकेका माछा: सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु
कार चेसिस - यो के हो?